Mitodika Amin’ny Teknolojia: Mampiasa Ny Wikipedia Hiadiana Amin’ny Herisetra Mihatra Amin’ny Vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Janoary 2014 3:06 GMT
Nampiantrano ny Hack4Change voalohany tao India ny Breakthrough sy Hacks/Hackers New Delhi tamin'ny Asabotsy sy Alahady 7 sy 8 Desambra 2013. Ao anatin'ny hetsika ny hazakazaka lavitr'ezaka manangana sy mamelabelatra lahatsoratra ao amin'ny Wikipedia miompana amin'ny herisetra mihatra ny vehivavy, ary nohararaotina ihany koa ny fiarahana miasa amin'ireo tetikasam-pampitam-baovao nomerika mampiasa tahirin-kevitra mifandraika amin'ny zon'ny vehivavy ao India.
Niantsoana mpanao gazety, mpandrafitra laminasa, mpikaroka, mpilaza tantara, mpikatroka ary mpikambana hafa ao amin'ny fiarahamonim-pirenena ny hetsika ho fiaraha-mivory. Nandrisika ny “fandraisana anjaran'ireo amin'ny toerana lavitra” ihany koa ny Hack4Change mba ho mariky ny firaisankina sy ezaka hampielezana ny hetsika.”
Ireo fahadisoana marobe tamin'ny lahatsoratry Wikipedia mikasika ny trangan'herisetra ara-pananahana ao India no niteraka ny hetsika. Amin'ny tranga sasany, tsy mifanaraka amin'ny politika fanoratana ny herisetra ara-pananahana ireo lahatsoratra, na tsy mampiasa voambolana mampahafantatra ireo niharan'ny fanolanana nefa tsy mahalasibatra azy ireo ny lahatsoratra.
Mavitrika tanteraka amin'ny fanohanana ny fahalalàna maimai-poana sy ny fandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny teknolojia araka ny zava-misy Indiana i Noopur Raval, mpianatra ao amin'ny Oniversite Jawaharlal Nehru ao New Delhi. Notorontoronina niarahana tamin'i Satabdi Das, namana mpanohana sady mpikambana ao amin'ny vondrom-panohanana Womoz sy Women in Free Software ao Calcutta, (WFS – India) ity hevitra ity.
Mino i Raval fa isika dia,
Miaina ao anatin'ny tontolo izay mora itaoman'ny vaovao tsy misy olakolaka ny kazaram-pikatrohana rehetra sy ny halakin'ny fiovaovana araka ny lalàna sy araka ny politika. Amin'izany toe-javatra izany, ilaina ny manamaro ny loharanom-baovao tahaka ny Wikipedia amin'ny vaovao marobe sy amin'ny fanomezana vaovao isan-karazany ihany koa “.
Nilaza ny fahabangan'ny fampahafantarana azo vakiana avy hatrany ihany koa i Raval; amin'ny maha-mpikaroka azy, tsy mety mahita vaovao antserasera momba ny vehivavy, ny resaka an-tokantrano, ny nentim-paharazana ara-kolontsaina, sy ny sisa hafa avy amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana mihitsy izy.
Nanamarika ihany koa izy fa raha miresaka momba ny famoronana votoaty antserasera, dia mety hiteraka olana ny fahadisoan-kevitra ao an-toerana. Raha teo am-pikirakiràna ny lahatsoratra Wikipedia momba ny Raharaham-panorisorenana tao Guwahati tamin'ny taona 2012 izy, dia nahatsapa izy fa ny tena hitany nataon'ny mpanitsy izany lahatsoratra izany dia famoahana tranga mahamenatra ary mandiso ny fomba fijery ny vahoaka Indiana. Hoy izy,
To write responsibly and acknowledge women's expression — is not a universally obvious and accepted notion and runs into obstacles given the stakes of people involved in women's projects.
Ny fanoratana mahatsapa andraikitra sy mahalala ny fomba fanehoan-kevitry ny vehivavy – dia tsy hevitra mibaribary sy ekena eran'izao tontolo izao ka mitarika azy ireny ho lasa sakantsakana rehefa fantatra ny olona mirotsaka amin'ireo tetikasan'ny vehivavy.
Nihevitra ihany koa i Raval fa misy ireo ohatra hafa izay mila ifampiraharahana sy iadian-kevitra ny fitsipiky ny Wikipedia rehefa hanoratra ireny trangan-javatra ireny. Ohatra, tamin'ny raharaha Asaram Bapu, izay voalaza fa nisy fanohintohinana ara-pananahana izay nitarika adihevitra raha tokony hampiasaina ny voambolana “fanolanana” na tsia sy ny hoe rahoviana no tokony na tsy tokony hilaza antsipirahan-javatra hatramin'ny kely indrindra.
Raha anisan'ny hetsika goavana ihany ny fanitsiana lavitr'ezaka Wikipedia, dia te-hahita lahatsoratra 2 na 3 mamahavaha ireo lohahevitra mikasika ny olan'ny miralenta i Raval.
Miasa ao amin'ny Breakthrough, fikambanana mampiasa fampahalalam-baovao, kolontsaina sy teknolojia pop mbamin'ny fanentanana ny fiarahamonina sy mahatonga hanao zavatra, i Shobha SV. Hoy izy:
Tahaka ireo sehatra hafa ho an'ny daholobe ihany ny Aterineto. Miatrika fanavakavahana sy fanelingelenana tahaka eny an-dalana ihany ny vehivavy. Mitarika fotsiny any amin'ny fanilikilihana ny vehivavy ny fanelingelenana virtoaly ka mila mitaky toerana izahay. Mety hisy ihany ny fitakiana toerana virtoaly raha maro kokoa ireo vehivavy mampiasa Aterineto ary fenoina feom-behivavy ny fitaovam-pifandraisana rehetra.
Niihevitra i Shobha fa ny fanombohan'ny fanamaroana ny tahiry ao India amin'ny fitaovana nomerika sy misongadina vaovao ho ahafahana milaza tantara amin'ny fomba hafa.
Efa ho herintaona tamin'ny niandohan'ny raharaha fanolanana ao Delhi, Raval nilaza hoe:
Generally, the feeling is that people have woken up to the fact that rapes don't only happen in slums or dimly lit areas, they can happen anywhere. I also read that the numbers on rape only reflect reported rapes. But, it's heartening to see everyone at least talk about an issue that is brushed away otherwise.
Amin'ny ankapobeny, ny fahatsapàna fa efa fantatry ny olona fa tsy eny amin'ny faritry ny mahantra na faritra maizimaizina ihany no hitrangan'ny fanolanana, fa afaka miseho na aiza na aiza izany. Nahavaky ihany koa aho fa ireo fanolanana nanaovana fitoriana ihany ahatarafana ny isan'ny fanolanana. Saingy mampihetsi-po ny mahita ny rehetra farafaharatsiny miresaka lohahevitra iray efa voafafa amin'ny endrika hafa.
Nokarakaraina tao anatin'ilay 16 andron'ny fikatrohana miady amin'ny herisetra amin'ny vehivavy ny Hack4Change. Nandritra ny hetsika naharitra 2 andro, navoakan'ireo ekipa ny lahatsoratra momba ny Raharaha Fanolanana tao Mathura, ny Torolalana Vishaka, ny Fitroarana tao Muzaffarnagar tamin'ny 2013 ary ny Herisetra Mihatra amin'ny Vehivavy Dalit. Ankoatra izany ny mpandray anjara dia niasa tamin'ny alalan'ny tahirin-kevitra samihafa ahitana antontanisa, tahirim-peo, tahirin-dahatsary, ary nametraka tombamaso ahafahana indray mijery. Ny fikasan'ireo mpikarakara dia ny hizara ireo vokatra farany avy amin'ny hetsika eo ambany lalànan'ny “creative commons”.
Azo jerena ao amin'ny Facebook ny vaovao sy ireo sary momba ny Hetsika.